Semalt: Ramba Wakachengeteka Kubva Chii Chine Hackers NeZvimbiso Zenzvimbo dzePadhiso
Tinowanzonzwa nezvesayiti inotarirwa nevashambadzi nevatambi. Vazhinji vema webmasters vanofunga kuti kana pasina deta yekuba sezvakataurwa nekadhi rechikwereti kana ruzivo rwebhangi, kukanganisa nzvimbo dzavo hazvina basa. Zvinosuruvarisa, hazvina kunaka sezvo vatengesi vanogona kuita zvinhu zvakawanda neShoko ravo rePeoplePress.
Zvinhu zvikuru zvinonyadzisa kana kuti spammers zvinogona kuita newebsite yako zvinotsanangurwa pasi apa naRyan Johnson, nyanzvi inotungamirira Semalt - made in india tv company.
Nzvimbo dzakasiyana-siyana uye dzinozvitora pasina:
Kazhinji kacho, vanokuvadza kana vese vanotora nzvimbo yehutano yenyu uye zvinyorwa zvavo pachavo. Nokudaro, dzimwe nzvimbo dzepawebsite dzinorwiswa, uye zvinyorwa zvezvematongerwo enyika zvinotsiviwa nemashoko ane chokuita nehugandanga. Vaseki vanongorumbidza chete kuti vakurwisa nzvimbo dzenyu uye hamugoni kuita chinhu kuti vavhare zvavakaita. Chero ani zvake anoshanyira nzvimbo yako yepaiti achazoziva kuti nzvimbo yako yakave yakanyengerwa. Muenzaniso wenzvimbo yakatsinhirwa is opennet.net. Kune vaseki vanotora zvinyorwa zvako ne propaganda, webhusaiti yako ndiyo nzvimbo yekushambadzira pachena.
Vashandi vanoenderera mberi kutumira ma spam emails kuvanhu vakawanda vachishandisa mashoko enyu, zvakadai semasername kana mapepa. Statistica inoratidza kuti 54% yeemaimeri ose akatumwa kana kugamuchirwa aiva spam..Imwe ruzivo rwekuongorora inoratidza kuti vatengesi vanokanganisa mazamu akawanda eWebsitePress uye vanovashandisa kutumira spam emails kune vakawanda vashandisi zuva rimwe nerimwe. Muzviitiko zvakawanda, webmasters havatombozivi kuti nzvimbo dzavo dzakaroverwa nevanotya. Vanogonawo kuona kuti mawebsite acho anononoka uye mapikisi ari muvhava ave dambudziko rakawanda. Vanopikisa vanowana zvikomborero zviviri kubva pane chinhu ichi: kutanga, vanoshandisa sevha yako mishonga pasina mari. Chechipiri, inoparadza mukurumbira wako paIndaneti uye inoparadza nzvimbo yako yekutsvaga mumatsotsi ekutsvaga.
Vanokuvadza kana kuti spammers vanobatanidzwa mumabasa akaipa. Vakadzikinura vanobudirira kuti vashandise motokari kune dzimwe nzvimbo dzakashata uye dzinokuvadza. Vashandisi havazivi kunyange kuti izvi zviri kuitika kwavari, uye zvinowanzoitika kana zvivako zvako zvisingaratidzi zvakanaka. Vanopikisa vanoshandisa zvinyorwa zvekudzokorora uye vanotumira mitemo yakakwirira kune mawo mawebsite. Chinangwa chavo ndechekuvandudza kutsvakurudza injini dzekutsvaga kwemasayiti avo uye kuparadzira zvakashata zvinowanikwa paIndaneti.
Mazano ekubata mazano:
Vaseki vanoshandisa mapeji ekunyengera kuti vanyengedze vashanyi kuti vawane ruzivo rwomunhu kana ruzivo. Kazhinji kazhinji, vanofananidza bhangi kana vatengesi uye vanoedza kutitumira kuti tipei ruzivo rwakadai semazita edu uye mapepaji. Vanodzibawo zvichemo zvedu zvekadhi rechikwereti vachishandisa mapeji aya ekunyora. Vanyori vanotora mazita akawanda pamusoro pezita rakakurumbira rinonzi WordPress site, uye muenzaniso wepishing page ndi eff.org.
Ransomware chirongwa chinonyangadza chingavhara kusvika kune nzvimbo yako uye inokumbira kuti iwe ubhadhe rudzikinuro kana iwe uchida kuva nehutano hwakadzorerwa. Vashandi vanoshandisa rudzikinuro sehuwandu hwekuwana, uye inorwisa mawebsite akawanda uye mabloggi. Kuti udzivise rudzikinuro rwekudzikinura, iwe unofanirwa kunge uine zvinyorwa zvefaira rako. Kana iwe uine mafaira ekuchengetedza, iwe unogona kubhadhara rudzikinuro kune vanokuvadza sezvo vasingazokubvumi kushandisa Shoko rako rePepa yePepanhau nekuda kwebhizimisi.
Pasinei nokuti mune bhizinesi rei uye kuti mutengesi weWebsitePress yako inowanikwa sei, vanokuvadza kana vanopikisa vanogona kuverenga kuti vangashandise sei mapeji ewebhu pamusana pezvikonzero zvako.